ရိုးရာ Trend - MT4 အညွှန်းကိန်းများ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မေ 22, 2019
နေအိမ် MT4 အညွှန်းကိန်းများ ရိုးရာ Trend
တစ်ဦးမြင်ယောင်ရန်လွယ်ကူဘားသို့လမ်းကြောင်းသစ်ဒေတာကိုထည့်လေ့မရှိ. အပြာရောင်တက်ဖြစ်, အနီရောင်ကဆင်းဖြစ်ပါသည်. ဘယ်အချိန်မဆိုဘောင်ပေါ်အကျင့်ကိုကျင့်.
setting များကိုများစွာသောလူနှင့်အတူလမ်းကြောင်းသစ်ညွှန်ပြချက်. ညှနျကွားပြသ (အနီေရာင်) တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ (ပြာသော) နှစ်အရောင် Histogram အဖြစ်လမ်းကြောင်းသစ်၏. အဓိကအချက်ပြသုညလိုင်းများ၏ကူးများမှာ, သစ်တစ်ခုမြင့်မားသော / အနိမ့်ရောက်ရှိ, မတူကွဲပြား.
အနီရောင်ဂရပ်သုညထက် သာ. ကြီးမြတ်သည်နှင့်ကြီးထွားလာခဲ့လျှင် – အီရန် go (တစ်ချိန်တည်းမှာအပြာပုံပြမျဉ်းသုညထက်လျော့နည်းခြင်းနှင့်ရေတံခွန်ပါလျှင် – အဆိုပါ uptrend အားကောင်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်)
အနီရောင်ဂရပ်သုညထက်လျော့နည်းခြင်းနှင့်ရေတံခွန် အကယ်. – bearish go (တစ်ချိန်တည်းမှာအပြာပုံပြမျဉ်းသုညထက် သာ. ကြီးမြတ်သည်နှင့်ပေါက်လျှင် – အဆိုပါ downtrend အားကောင်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်)
ဘုံ parameters တွေကို – နှစ်ဦးစလုံးလိုင်းများကိုထိခိုက်ကြောင်း parameters တွေကို:
“လျှောက်ထား”. အဆိုပါညွှန်ကိန်းတွက်ချက်မှုများအတွက်အခြေခံ. ဤကိစ္စတွင်အတွက်စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည် – ပိတ်, စသည်တို့ကိုဖွင့်ပါ.
အဆိုပါလမ်းကြောင်းသစ်ဦးတည်ချက်လိုင်း၏ parameters (အနီရောင်လိုင်း). အဆိုပါ iTrend အတွက်လမ်းကြောင်းသစ်ဦးတည်ချက်ကတော့ Bollinger တေးဂီတအဖွဲ့များနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာညွှန်ပြချက်အပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ချက်, ထို့ကြောင့်အဆိုပါ iTrend လမ်းကြောင်းသစ်ဦးတည်ချက် Bollinger တေးဂီတအဖွဲ့များကဲ့သို့တူညီသော setting များကိုရှိပါတယ်:
“mode ကို”. အဆိုပါ iTrend ၏တွက်ချက်မှုအတွက်သုံးစွဲဖို့အတွက် Bollinger တေးဂီတအဖွဲ့လိုင်းသတ်မှတ်ရန်: အဓိက, ထိပ်တန်းသို့မဟုတ်အောက်.
“ကာလ”. အဆိုပါ iTrend ညွှန်ပြချက်၏ကာလ
“တိမ်းယိမ်းခြင်း”. အဆိုပါ iTrend ညွှန်ပြချက်၏သှဖေ
အဆိုပါလမ်းကြောင်းသစ်အစွမ်းသတ္တိကိုလိုင်း၏ parameters (အပြာလိုင်း). အဆိုပါ iTrend အတွက်လမ်းကြောင်းသစ်အစွမ်းသတ္တိ၏ line ကိုအလက်ဇန်းဒါးအသက်ကြီးနေဖြင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းအပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ချက် – ဝံပါဝါနှင့် Bull ပါဝါ
“ကာလ”. အဆိုပါ iTrend လမ်းကြောင်းသစ်လိုင်း၏.
ရိုးရာ Trend တစ်ခု Metatrader ဖြစ်ပါသည်4(MT4) အညွှန်းကိန်းများနှင့် Forex ညွှန်ပြချက်၏အနှစ်သာရမှာစုဆောင်းသမိုင်းဒေတာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်.
ရိုးရာ Trend သာမန်မျက်စိမှမမြင်ရတဲ့သောစျေးနှုန်းဒိုင်းနမစ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောပိုင်ထိုက်သောနှင့်ပုံစံများကို detect လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများအတွက်ထောက်ပံ့.
ရိုးရာ Trend.mq4 install လုပ်နည်း?
ရိုးရာ Trend.mq4 Download
သင့်ရဲ့ Metatrader Directory ကိုမှ Copy ကူးရိုးရာ Trend.mq4 / ကျွမ်းကျင်သူများက / အညွှန်းကိန်းများ /
ရိုးရာ Trend.mq4 ပေါ်မှာ Right click နှိပ်ပြီး
indicator ရိုးရာ Trend.mq4 သင့်ရဲ့ဇယားအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်
သင့်ရဲ့ Metatrader ကနေရိုးရာ Trend.mq4 ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို4ဇယား?